श्रीमतीलाई बिना मेकअप देखेपछि बिहेको भोलिपल्ट पतिले दिए उ’जुरि …! « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ भाद्र १० गते बुधवार प्रकाशित
विवाह फरक फरक ठाँउमा फरक किसिमले गर्ने गरिन्छ विवाहको दिन बेहुलि निकै सुन्दरी देखिने गर्दछन् । त्यस्तै विवाहमा सुन्दरी देखिएकी युवति भोलि पल्ट भने पतिको त’गारो बनेकी छिन् । यो घट-ना हो अल्जेरियाको एक युवले बिहे त गरे तर उनले नसोचेको घ’टना भयो ।
बिहेको भोलिपल्ट उनको लागि कालो दिन नै हुन पुग्यो । उनले विवाहको दोस्रो दिन आफ्नो पत्नीलाई देखेर विश्वासै गर्न सकेनन् उनि आफ्नै पत्नि हुन भनेर बिहेको दिन निकै सुन्दरी देखिएकी पत्नि भोलिपल्ट भने रुप नै फेरीएको देखे।
ए’क्कासी पत्निको रुप देख्दा उनी निकै आ’त्तिए । उनकी पन्ति बिहेको भोलिपल्ट बिना मेकअपमा देखा परेकी थिइन् ।उनलाई देखेपछि उक्त पुरुष निकै आ-त्तिए उनले धुमधाम बाजा बजाएर बिहे गरेकी श्रीमतीले आफुलाई नै धो-का दिएको अ’रोप लगाए। त्यसै कारणले उनले पत्नी वि’रुद्ध के’स हालेका छन् ।
के’स हाल्दै भने ठुलो धो-का भएको र पि-डा दिएको भन्दै उल्टै पत्निसंग २० हजार डलर क्ष’तिपुर्ति पनि माग गरेका छन्
सुन्दा अचम्म लाग्छ : एक व्यक्तीले फोन चो’रे, अनुहार मिल्ने अर्का व्यक्तीलाई १७ वर्ष जे’ल,
पाल्पामा गाडी दुर्घटना : ११ जना घाइते, एकको अवस्था नाजुक
फोन गरेर बोलाए पछि म उसैको खाजाघरमा पसे, लगभग १५ मिनेट लाग्यो ! पुरा पढ्नुहाेस…